အရောင်းအ ၀ ယ်စက်စျေးကွက်၏အလားအလာကဘာလဲ။ Industries news - Hunan Zhonggu Science and Technology Co. , Ltd ။
အရောင်းအ ၀ ယ်စက်ဈေးကွက်အတွက်အလားအလာကဘာလဲ။
အရောင်းအ ၀ ယ်စက်ပုံစံများ၏စဉ်ဆက်မပြတ်တိုးတက်မှုနှင့်အတူ ရောင်းချနိုင်သောကုန်ပစ္စည်းများသည်ကျယ်ပြန့်စွာကျယ်လာသည်. earlier အရောင်းစက်တွေ တရုတ်နိုင်ငံ သာ အတူလုပ်ကိုင်ခဲ့သည် ဒင်္ဂါးပြားငယ်များ၊ ဥပဒေကြမ်းများ နှင့် ရောင်းချသည့်ထုတ်ကုန်များသည်ပုလင်းသို့မဟုတ်စည်သွတ်အချိုရည်များသာဖြစ်သည်. ဒီနေ့ခေတ်အသိဉာဏ် တော့အရောင်းစက်တွေ အင်တာနက်ချိတ်ဆက်မှုနှင့်သဟဇာတဖြစ်ကြသည် နှင့်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှု နှင့်ရောင်းချသောထုတ်ကုန်များသည်အချိုရည်များ၊ ရေစာများ၊ အစားအစာများနှင့်နေ့စဉ်သုံးပစ္စည်းများအတွက်အကန့်အသတ်မရှိတော့ပါ။
အရောင်းစက်များမှာအသုံးများသောပစ္စည်းများဖြစ်သည် of စီးပွားဖြစ်အလိုအလျောက်, သူတို့ကနေကန့်သတ်ခြင်းမရှိဘဲအလုပ်လုပ်ကြသည် အချိန်နှင့်နေရာ, လူအင်အားကယ်တင်နှင့်အရောင်းအလွယ်ကူချောမွေ့. သူတို့က ထို့အပြင် ၂၄ နာရီ mini-mart အဖြစ်လူသိများသည်s။ အရောင်းစက်စက်ရုံသည်သတင်းအချက်အလက်နည်းပညာနှင့်ပိုမိုကျိုးကြောင်းဆီလျော်မှုဆီသို့ ဦး တည်နေသည်.
လက်လီရောင်းဝယ်ရေးစနစ်သစ်တွင်အရေးအပါဆုံးလေယာဉ်တင်သင်္ဘောအဖြစ်အရောင်းစက်များသည်ပိုမိုကျစ်လစ်။ ပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးရုံးအဆောက်အအုံများ၊ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအချက်အချာများ၊ ကျောင်းများ၊ ဈေးဝယ်စင်တာများ၊ အရောင်းအ ၀ ယ်ဈေးကွက်သည်ဆက်လက်တိုးတက်နေ ဦး မည်။ ဤစက်မှုလုပ်ငန်း၏ကြွယ်ဝမှုနှင့်မိုဘိုင်းငွေပေးချေမှုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတို့နှင့်အတူလိုက်ပါလာလိမ့်မည်။ ၂၀၁၁-၂၀၂၅ ကာလအတွက်နှစ်စဉ်တိုးမြှင့်နှုန်းသည် ၃၀% ဖြစ်လိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ရသည်။
နောက်တစ်ခု: Vending Machine သည်အမျိုးမျိုးသောစီးပွားရေးပုံစံများနှင့်အတူအသိဉာဏ်ရှိသောလက်လီရောင်းဝယ်မှုဈေးကွက်တွင်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၏အာရုံစိုက်မှုဖြစ်လာသည်။